Nei isu Mingwang？ - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co, Ltd.
Mumisika yekumhiri kwemakungwa, Mingwang yakagadza yakakura yekushambadzira sevhisi network munyika dzinopfuura zana nematunhu epasirese.
Yakakwira-mhando yekutengesa zvinhu zvekudiridza muChina
• 24/7 nyanzvi kutaurirana.
Tine mberi chikwata, kwesainzi chikwata uye michina vashandi.
• Kurumidza kuendesa, Yakagadzikana nguva yekuendesa.
Mushure mekutengesa sevhisi inopihwa zvakare kuona kuti iwe unowana chinonakidza zvachose chiitiko chekutenga nesu.
1.Ndeapi Masevhisi Anopihwa naMingwang?
Mingwang inopa yekugadzira mitsara yekutenderera, yakati sandara, yakatetepa-madziro uye gobvu-madziro kudonhedza pombi yekudiridza pamwe neyekudonhedza tepi, PE uye PVC pombi. Isuwo tinotengesa madrippers anotenderera uye akapamhama uye tinopa akasiyana masevhisi kubva kune yakadzama kuronga kuronga kutenga zvigadzirwa zvidiki zvekudiridza; Mingwang anotarisira yekuisirwa uye yekudzidzira vashandi nekuramba uchitsigirwa uye tekinoroji yazvino kukuchengetedza iwe uchikwikwidza mumisika yemuno neyepasirese. Iwe unogona kuve wakasununguka wakazvigadzira wekudonhedza pombi yekudiridza, tepi yekudiridza, PE pombi uye PVC pombi ine Mingwang
Mingwang ane makore anopfuura makumi matatu nemashanu ekugadzira ruzivo mukudonhedza kudiridza uye PE, PVC pombi extrusion. Isu takaisa michina yemakambani anopfuura zana anozivikanwa uye takabatsira vatengi mukugadzira mafekitori.
Isu tinopa mhando yepamusoro, yekumhanyisa, michina isina kujeka ine tarisiro pane nyore uye nyore kwekushandisa kwakakodzera kune vashoma uye vakapusa vashandi. Michina yedu yakaderera kugadziriswa uye yakave munda kuyedzwa kuti irambe maindasitiri mamiriro. Paunotenga kubva kuMingwang hausi kungowana michina yemhando yepamusoro, asi kuenderera mberi nerutsigiro rwehunyanzvi kubva kuchikwata chedu icho chakazvipira kukubatsira iwe kuti ubudirire.